Sodana : Ilay Mafana Fo Avy Ao Sodana, Alim Boushi, Navoaka Ny Fonja · Global Voices teny Malagasy
Sodana : Ilay Mafana Fo Avy Ao Sodana, Alim Boushi, Navoaka Ny Fonja
Voadika ny 25 Janoary 2012 3:56 GMT
Raharaha iray izay navoitran'ireo bilaogera avy ao Sodana sy ireo mpandefa bitsika tato ho ato, milaza ny toetoetry ny famoretana misy ao Sodana amin'izao fotoana, ilay fisamborana ny mafana fo politika avy ao Sodana sady Injenira Mohamed Hassan Alim, antsoina hoe Boushi. Alim dia navoaka ny 17 Janoary 2011, taorian'ny 24 andro nitanana azy am-ponja. Nosamborina izy noho ny fanakianana am-pahibemaso ary mahery vaika an'i Nafi Ali Nafi, politisiana ngezalahy avy ao Sodana, ho nanao kolikoly.
Talohan'ny famotsorana azy, ilay bilaogera Sodane, Mimz dia nanoratra lahatsoratra mahavariana iray maneho ny hatezerany sy manazava ny nanjo an'i Alim.
Nandritra ny roa taona nifanesy, ny governemanta Sodane dia nitazona am-ponja tsy ara-dalana mafana fo politika maro dia maro, mpikambana ao amin'ny antoko mpanohitra, revolisionera mpanohitra ny PCN, mpianatra ary mpanao gazety izay nitonona ho miady amin'ny tsy rariny. Izay nanjo ireny olona voatazona tany amin'ny fonjan'ny fiarovana nasionaly ireny na“Ghost Houses” dia tsy mazava mihitsy ary mihoatra lavitra amin'izay fahatakaran'ny olona salama saina azy.
…Ny tapaky ny volana Desambra, Alim dia nijoro teo anoloan'ny lampihazo iray tao amin'ny Anjerimanontolon'i Khartoum ary niatrika tamim-pahasahiana an'i Nafie Ali Nafie noho ireo heloka bevava nataony tamin'ny vahoaka Sodane. Niteny ho antsika izy, ho ahy ary ho an'ireo vahoaka Sodane izay miady isan'andro mba hisian'ny hanin-ko hanina eo ambony latabany, hahita asa ary hiaina fiainana mendrika. Naborany teo ny zavatra sasany tsapantsika izay atrehantsika noho io governemanta misy ankehitriny io, ary nifanandrina tamin'i Nafie sy ny tariny noho ny kolikolin'izy ireo.
Nandritra ny telo minitra, Alim dia lasa feon'ny mponina tsirairay voageja ao Sodana izay tsy mbola niaritra fijaliana toa izao teo amin'ny fiainany no sady mijery ny tombotsoan'ireo ao amin'ny governemanta sy ny mpikambana ao aminy ary ny fianakaviany amin'ny alalan'ny fanomezany azy ireo vola, asa, ary tombotsoa manokana samihafa azo tamin'ny rà sy ny hasasaran'ny ampahany betsaka amin'ny mponina ao Sodana, toy ny hoe natao homena azy ireo izany.
Andro vitsy taorian'ny lahateniny, izay noraketina sy nalefa tanaty YouTube, Alim dia nosamborina tao an-tranony. Ilay lahatsary ankehitriny dia efa nojeren'ny olona maherin'ny 240.000. “Amnesty International” dia nandray ilay tranga ary namoaka fanambarana mikasika ny fitanàna am-ponja an'i Alim.
Ny 26 Desambra 2011, Mohamed Hassan Alim dia nosamborinà lehilahy fito miakanjo sivily tao an-tranony tao Khartoum, izay heverina fa avy amin'ny NISS. Nodarohan'ireo olona ireo teo imason'ny reniny izy ary nentina tanaty fiara. Notanana mangingina tany amin'ny toerana tsy misy mpahalala izy nanomboka tamin'ny fotoana nisamborana azy. Niatrika fampijaliana mahery vaika sy fomba fitondrana ratsy hafa maro izy.
Ireo bilaogera ao Sodana sy ireo mpandefa bitsika dia manahy ny amin'ny ho avin'i Alim. Mimz ihany koa dia tafiditra ao anatin'izany ary nitroatra noho ny fisamborana an'i Alim :
Ny hamotsorana an'i Alim no angatahantsika, ary ny ràny dia tsy eo an-tanan'i Nafie irery ihany, fa ho eo an-tanantsika ihany koa raha toa ka tsy mangataka ny fiarovana azy sy ny famotsorana azy tsy misy hatak'andro isika.
Eto amin'ny tontolo iray izay tsy ahitàna intsony ny lakaram-pahalmboniana, ary ny tsy fahasahiana mianaka toy ny valan'aretina, Alim dia sahy ary nopetahana ny anarana hoe”Bouazizi ao Sodana”.
Ilay olan'i Alim amin'i Nafie dia mifandraika amin'ny kolikoly sy fijerena tavan'olona … nahatonga ny fakàna an-keriny azy sy manamarina ny antony nampijaliana ny reniny tamin'ny tsy fahafantarana ny misy azy ve izany, Inona no natao azy tany ary raha tsy havotsotra mihitsy moa izy?
Tetsy an-kilany, Zol Sudani, dia nizara ny eritreriny mikasika ilay resaka tao aminà lahatsoratra anaty bilaogy iray amin'ny fiteny arabo, miaraka amin'ny ampahany nadika etsy ambany.
Naboridan'i Boushi isika rehetra. Naboridany ny Sodane, tsirairay. Naboridany hihanjahanja amintsika ihany. Naboridany i Nafi Ali Nafi, sy ireo namany izay milaza ny tenany ho mpivavaka. Noporofoiny fa malemy izy ireo ary tsy mahavita ny mamaly tohan-kevitra iray aminà tohan-kevitra iray hafa. Nasehony fa tsy natao hiarovana ny firenena sy ny vahoakany ny tafi-panjakana toy ny toky nomen'izy ireo tamin'ny fotoana nanaovan'izy ireo ny fanekeny. Noporofoiny fa izy ireo dia mijoro eo fotsiny hiaro ny fitondrana, na dia hampitondra takaitra ny olona osa tsy manana fitaovam-piadiana aza izany.
Ireo Sodane ao amin'ny Twitter, toa an'i @daloya, dia nandefa bitsika taamin'ny tenifototra #FreeAlim nanontany izay nisy an'i Alim.
@daloya : Ny renin'i Boshi, “Nomena toky aho fa hijery an'i Boshi 2 herinandro taorian'ny fisamborana azy, mbola tsy afaka nijery azy ihany anefa aho hatramin'izao “. # # FreeBoshi FreeAlim # Soudan
Hatramin'ny namoahana azy, Alim izy tenany mihitsy, no nanambara tamin'ny Bloomberg News, “Tsy fantatro na ho faty aho, na hotànana am-ponja mandrakizay, na mbola hahita ny havako indray.”
Ny 1 Janoary 2012 ny mponina ao Sodana dia nankalaza ny faha 56 taona nahazoany ny fahaleovantenam-pirenena. Fa ny sasany kosa anefa, toa ilay Sodane bilaogera, D3a Bin Kar dia nametra-panontaniana amin'ny hoe inona no ilàna ny fahaleovantena :
Nieritreritra fahaleovantena isika, tokony hahazo ny tena fahafahana isika, fitoviana, zon'olombelona ary fahafahana-manatanteraka ny nofinofy rehetra izay an'ny razambentsika mba ho an'ity firenena Sodana malalatsika ity.
Nandritry ny 56 taona lasa, niaina ady an-trano foana i Sodana, korontana, hain-tany, tsy fahampian-tsakafo ary farany teo dia fivakisana.
An-tapitrisany no maty tsy amin'ny ahoana, an-tapitrisany ireo nafindra toerana, an-tapitrisany ireo mandry fotsy. Tsy isa fotsiny ireo, kanefa misy olona an-tapitrisany izay tsy tokony niaina izany akory.
Azo nosorohana ihany anefa izany rehetra izany.
D3a Bin Kar dia manohy ny lahatsorany aminà fitetezana ireo tranga niseho tao Sodana ny taona 2011, ary mamarana izany amin'ny fanamarihana mahavelombolo kokoa.
Angamba, 2012, hanamarika ny tena fahaleovantenantsika marina.